Arbaco, Juun 31, 2013 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah akhristayaasheena ayaa weydiiyay haddii aan ognahay ama aan ognahay adeegga tarjumaadda wanaagsan ee khadka tooska ah. Waxaan gacansaar la leenahay Turjumaad Hal Saac ah, adeegga tarjumaadda xirfadeed ee internetka. Turjumaadaha waxaa sameeya beel ka badan 10,000 turjubaano xirfadlayaal ah adduunka oo dhan iyagoo isticmaalaya websaydhka Hal-saac Turjumaad, ama adeeggooda tarjumaadda emaylka. Adeegsiga daruuraha Turjumaadda Hal Saac ah ama tarjumadooda API, macaamiisha waxay ka faa'iideysan karaan dhimista kharashka tarjumaadda iyagoo diiradda saaraya turjubaanada qaaliga ah ee guriga ku jira
Sabtida, Janaayo 23, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxbaan u qabanaa si fudud maxaa yeelay waa sidii lagu sameeyay. Qofna ma xasuusto sababta saxda ah, laakiin waan sii wadeynaa xitaa haddii ay waxyeello naga soo gaarto. Markaan daawado kala duwanaanta iibka iyo kala sareynta shirkadaha casriga ah, qaab dhismeedka isma badelin tan iyo markii aan heysanay dad iibiya oo riixaya laamiga oo garaacaya doolarka. In badan oo ka mid ah shirkadaha aan booqday, “iib” badan ayaa ka dhacaya dhanka suuqgeynta derbiga. Iibinta ayaa kaliya qaadata